(Daawo video):- Guddoomiyihii hore ee Hay’adda waddooyinka Puntland Oo Maanta Xilkii ku wareejiyey ku xigeenkiisii.
March 7, 2017 - Written by berka83 - Edited byberka83 Guddoomiyihii hore ee hay’adda waddooyinka dawladda Puntland Eng. Maxamuud Cabdinuur Aadan ayaa maanta oo taariikhdu tahay 07 March 2017 wuxuu si rasmi ah xilkii ugu wareejiyey ku xigeenkiisii Siciid Maxamuud Jaamac oo hadda ah guddoomiye ku xigeenka Hay’adda waddooyinka Puntland ahna ku simaha Guddoomiyaha Hay’adda waddooyinka Puntland.
Eng. Maxamuud Cabdinuur Aadan ayuu Madaxwayne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas xil ka qaadis ku sameeyay Sabtidii lasoo dhaafay, isagoo xilkaan hayey Muddo 4 sano ah uuna Bishii maarso ee sanadkii 2013 xilkaan u magacaabay Madaxwaynihii hore ee Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole.
Munaasibadda Xil wareejinta oo ka dhacday hoolka shirarka Wasaaradda Hawlaha guud, Gaadiidka iyo Guryeynta dawladda Puntland ee magaalada Garoowe, waxaa kasoo qaybgalay Hay’adaha Bahwadaagta la ah Hay’adda waddooyinka Puntland ee PHA, sida ILO, GIZ iyo kuwo Maxalli ah.
Eng. Maxamuud Cabdinuur oo khudbad dheer oo ku saabsan waxqabadkiisii mudadii uu xafiiska joogay jeediyey ayaa si rasmi ah faylashii Hay’adda ugu wareejiyey ku xigeenkiisii, wuxuuna soo bandhigay dhammaan waxyaabaha uu wareejiyey oo iskugu jiray Qoraal iyo waxyaabo toos ah, sida Hay’addu heerka ay hadda joogto, dhaqaalaha ay haysato ee igu jira Koontooyinka Bangiga dawladda iyo Bangiyada kale, Gaadiidka masuuliyiinta Hay’adda iyo Hubka lagu ilaaliyo.
Sidoo kale wuxuu mahadcelin iyo dardaaran u soo jeediyey Shaqaalaha hay’adda ee uu mudada Afarta sano ah hogaanka u ahaa, isagoo xusuusiyey in kaligiis uu meesha ka baxay, ayna tahay inay dadaalkooda sii labo jibaaraan.
Dhammaan kasoo qaybgalayeeshii Munaasibadda xil wareejinta ayaa Qiray in Maxamuud uu door weyn kasoo qaatay horumarinta Puntland gaar ahaan inay fadhiidkii ka baxdo Hay’adda PHA.
Hay’adaha Bahdawaagta la ah PHA, sida ILO iyo GIZ ayaa dhankooda sheegay inay jeclaan lahaayeen inay Eng. Maxamuud lasii shaqeeyaan oo uu lasii wado Hawlihii ay wada wadeen, balse go’aanka Madaxwaynuhu ku baddelay aysan ka hor imaan karin oo ay ku qanacsan yihiin.
Ugu dambayntii Siciid Maxamuud Jaamac oo xilka kala wareegay ayaa sheegay in Guddoomiyihiisii hore uu ahaa nin hawlkar ah, wuxuuna u rajayeeyay inuu ilaahay u fududeeyo Hammigiisa Siyaasadeed ee Mustaqbalka.
Halkaan ka daawo Muuqaalkii Xil wareejinta.